“ART + PLUG” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အနုပညာပြပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ~ The ICT.com.mm Blog
“ART + PLUG” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အနုပညာပြပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော Art + Plug ၏ အနုပညာပြပွဲတွင် ပြခန်းဝင်ကြေး ၂၀ဝ ကျပ် ကောက်ခံခဲ့ပါသည်။
အနုပညာပြပွဲအများစုကို ပြပွဲဝင်ကြေး ကောက်ယူလေ့မရှိသော်လည်း ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ခင်ဝမ်း၊ ပိုပို၊ စိုးနိုင်(ဝမ်းတွင်း) တို့၏ လောကနတ် အနုပညာပြခန်း၊ ယုဒသန်ခန်းမတို့တွင် ပြသခဲ့သော ပြပွဲများတွင် ဝင်ကြေးကောက်ယူခဲ့ဖူးပါသည်။
သတိမဲ့ သုံးစွဲနေကျ တန်ဖိုးတစ်ခုအား အနုပညာအတွက် ဖဲ့ပေးစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Art+Plug သည် ယခုပြပွဲတွင်လည်း ဝင်ကြေး ၂၀ဝ ကျပ် ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Date : 17 to 19, January 2014
Venue : Pansodan Scene. No. 144, 2rd flr, Pansodan St. (Middle Block),
Kyauktada Tsp., Yangon Myanmar.
Newer Photoshop ကို အစားထိုးသုံးနိုင်တဲ့ GIMP
Older CES ပွဲမှ LG ရဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ နည်းပညာထုတ်ကုန်များ